Orgnima Website DevelopmentOrgima | Build Better Business
WE OFFER OUR PROFESSIONAL SERVICES
Orgnima ကုမ္ပဏီ ကို ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ Orgnima မှ မြန်မာနိုင်ငံရှိ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတိုင်း အင်တာနက် နည်းပညာကို မိမိတို့ လုပ်ငန်းအတွက် အကျိုးရှိစွာ လွယ်လင့်တကူ သုံးစွဲနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပြီိး CMS ဝဘ်ဆိုဒ်များ ရေးဆွဲပေးခြင်း။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း များအတွက် Software Application များ ရေးဆွဲပေးခြင်း အစရှိသည့် ဝန်ဆောင်မှုများကို လုပ်ဆောင်ပေးလျှက်ရှိပါသည်။
WordPress CMS သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် လူသုံးအများဆုံး Content Management System တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ WordPress CMS ကို အသုံးပြု၍ တည်ဆောက်ထားသော ဝဘ်ဆိုဒ်ပေါင်း ၆ သန်းကျော်ရှိရာ၊ မိမိတို့ ဝဘ်ဆိုဒ် ၏ တည်ငြိမ်မှု အတွက် အထူး စိတ်ချရပါသည်။
အော်ဂနီမာ မှ ဝဘ်ဆိုဒ် တစ်ခုပြုလုပ်ရန်အတွက် အချိန် ၂ ပါတ်မှ ၃ ပါတ်အတွင်းသာ ကြာမြင့်သည့် အတွက် မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းအနေနှင့် အင်တာနက် သို့ အလျှင်မြန်ဆုံး နည်းနှင့် ချိတ်ဆက် နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
Orgnima မှ ပြုလုပ်ပေးနေသည့် ဝဘ်ဆိုဒ်များ အားလုံးသည် မည်သည့် Device ( မိုဘိုင်းဖုန်း, တက်ဘလက်, ကွန်ပျူတာ) မှမဆို အဆင်ပြေစွာကြည့်ရှုနိုင်သည့် အတွက် မိတ်ဆွေ ၏ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းအနေနှင့် ပြိုင်ဘက်များထက် ခြေတစ်လှမ်း အသာရနိုင်ပါသည်။
Orgnima မှ စီိးပွားရေး လုပ်ငန်းအတိုင်းအတွက် အီးမေးလ် အကောင့် အကန့်အသတ်မရှိ၊ အကန့်အသတ်မရှိ ပုံ၊ စာ စသည်တို့ ထည့်သွင်းနိုင်ပြီး၊ စာမျက်နှာ ၂၀ ပါဝင်သော၊ ကိုယ်တိုင်ပြန်ပြင်နိုင်သည့် CMS ဝဘ်ဆိုဒ်များကို ဈေးနှုန်း ၂၄၉,၀၀၀ ကျပ်မှ စတင်ရောင်းချပေးနေပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်း ဈေးနှုန်း အသက်သာဆုံး CMS ဝဘ်ဆိုဒ် ပြုလုပ်ပေးသည့် ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါသည်။
မိမိကိုယ်တိုင် ပြန်လည် ပြင်ဆင်နိုင်သော CMS ဝဘ်ဆိုဒ်များကို ပြန်လည် ပြင်ဆင်နည်း အတွက် သင်ကြားပေးခြင်း အပြင် ပြန်လည် ပြင်ဆင်နည်းအတွက် သီးသန့် User Manual စာအုပ် ကို မြန်မာ ဘာသာနှင့် ပါ ပံ့ပိုးပေးထားသည့် အတွက်၊ အလွယ်ကူဆုံး အသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံအနေနှင့် အင်တာနက်၊ အီးမေးလ်၊ ဝဘ်ဆိုဒ် အစရှိသည့် နည်းပညာ များကို စတင်အသုံးပြုသည့် အချိန် ဖြစ်သည်နှင့်အညီ Customer အတွက် ထောက်အကူ ပေးမှု သည် အလွန် အရေးကြီးသည်ဟု ယူဆထားပါသည်။ Orgnima ကုမ္ပဏီအနေနှင့် ပြုလုပ်ပေးခဲ့သော မိတ်ဆွေ ကုမ္ပဏီများထံမှ ၁၀၀% စိတ်ကျေနပ်မှု ရရှိထားပါကြောင်း ဂုဏ်ယူစွာနှင့် ပြောကြားလိုပါသည်။
E-Commerce / E-Commerce / E-Commerce / E-Commerce
Shwe Thant Myanmar
LRE Law Firm
Life Umbrella Tours
CMS Website / CMS Website / CMS Website / CMS Website / CMS Website / CMS Website / CMS Website / CMS Website / CMS Website / CMS Website / CMS Website / CMS Website / CMS Website / CMS Website / CMS Website / CMS Website / CMS Website / CMS Website / CMS Website / Myanmar / Myanmar / Myanmar / Myanmar / Myanmar / Myanmar / Myanmar / Myanmar / Myanmar / Myanmar / Myanmar / Myanmar / Myanmar / Myanmar / Myanmar / Myanmar / Myanmar / Myanmar / Responsive / Responsive / Responsive / Responsive / Responsive / Responsive / Responsive / Responsive / Responsive / Responsive / Responsive / Responsive / Responsive / Responsive / Responsive / Travels & Tours / Travels & Tours / Travels & Tours / Travels & Tours / Travels & Tours
Go & Go Travels and Tours
General / General / General / General / General / General / General / General / General
Paw Leck Engineering Pte-Ltd
Orgnima web applications are user friendly and creative design. With their innovative design our Travels and Tours Company attract more customer than ever. Their response to our request is in timely matter so that make us more trust in their service. There is no doubt that "Orgnima" will make every customer satisfactions in Web Application and Internet Marketing.
Hnin Wut Hmooe Han
အားသာချက် - Security ပိုင်းစိတ်ချရခြင်း။ - ပြင်ဆင်လိုသည်များကို ပြောကြားရာတွင် ပြင်ဆင်ပေးသည်များ ရှိခြင်း။ - ဈေးနှုန်းချိုသာခြင်း။ - မေးမြန်းမှုများကို နေ့ချင်း အပြီိး ဖြေကြားပေးခြင်း။ အားနည်းချက် - Package များမှာ e-Commerce Site အတွက် လိုအပ်တဲ့ Function အချို့ မပါဝင်ခြင်း (ဥပမာ- RSS Feed, View, Etc...) မှတ်ချက်။ ။Orgnima ၏ Service ကို အချိန်အနည်းငယ်သာ အသုံးပြုရသေးသောကြောင့် ဒီထက်ပို၍ ဝေဖန် မဆန်းစစ်နိုင်သေးပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကျွန်မတို့ 11cornerbag collection သည် Facebook မှ တဆင့် ကြော်ငြာ တွေ့ရှိပြီး ORGNIMA နှင့် စတင်ဆက်သွယ် ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ မိမိတို့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်း လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ရာတွင် မိမိတို့ ကိုယ်ပိုင် Website မှ တဆင့်ကြော်ငြာခြင်း သည် ပိုပို ထိရောက်မည်ဟု ယူဆသောကြောင့် Orgnima Co.,Ltd တွင် စတင် စုံစမ်း၍ လေ့လာခဲ့ပါသည်။ Orgnima Co.,Ltd နှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် ဝန်ဆောင်မှု နှုန်းထားများမှာလည်း သင့်တော် သောကြောင့် ကျေနပ်မှု အပြည့်ရရှိခဲ့ပါသည်။
Daw Nan Zi Zawa
Service is Best. Internet base and writing system web hosting more than better of other Myanmar web hosting service.
အမက မစုမေတင်ပါ။ fashionforum9.org website စလုပ်မယ်လို့ စဉ်းစားမိတာကတော့ Orgnima နဲ့ပဲ လုပ်ဖြစ်မယ်လို့ပဲ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ် - ဆုံးဖြတ်ချက်လဲမှန်ကန်ခဲ့ပါတယ်။ Customer လိုအပ်ချက်ဘက်ကရော User ဘက်ကရော စဉ်းစားပြီး အကောင်းဆုံး ဖြစ်နိုင်မယ့်ဟာတွေကို လမ်းညွှန်ပေးခဲ့တဲ့အတွက် အများကြီးကျေးဖူးတင်ပါတယ်။ နည်းပညာခေတ် တိုးတက်နေတဲ့အချိန် အနဲနှင့် အများ အမှီလိုက်နိုင်လို့ ကျေးဇူးပါ။ နည်းပညာဆိုင်ရာ Update များလဲ Orgnima မှ များများမျှဝေလို့ Win & Win Solution ဖြစ်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလျက်
Su May Tin
Good in speaking & happy to work. Hope in future we can work together more. Everything is done well.
Website ရောင်းချတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေ အများအပြားရှိနေပေမဲ့ ကျွန်တော် Orgnima ကို ရွေးချယ်ရခြင်းရဲ့ တစ်ခုတည်းသော ဆုံးဖြတ်ချက်မှာ အပြောနှင့် အလုပ် ညီပြီ်း တကယ် လက်တွေ့ကျတဲ့ ၀န်ဆောင်မှုကို ကျွန်တော် စိတ်တိုင်းကျအောင် အလျှင်အမြန် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တာဟာ Orgnima ဖြစ်နေလို့ပါ။